Ny tadin'ny herin'ny HomePod dia tsy natao esorina | Avy amin'ny mac aho
Ny tadin'ny herin'ny HomePod dia tsy natao esorina.
Pedro Rodas | | Apple products
Fihetsiketsehana inona no napetraka tao amin'ny faritra misy ny hevitra ao amin'ilay lahatsoratra niresahako momba ny lalana vaovao nalain'i Apple momba ny tariby herinaratra HomePod. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia manana aho niresaka momba ilay harato lamba vaovao izay manana ny tariby HomePod izay tsy isalasalana manome azy fijery premium bebe kokoa eo am-panabeazana ny tanjaka fihenjanana sy torsional.
Na izany aza, iray amin'ireo zavatra nolazaiko ihany koa ny tsy azo esorina ny tariby HomePod ary inona no nahagaga ahy fa be ny mpanaraka ny bilaogy nilaza tamiko fa Tokony hosoratako tsara ny tenako satria mety esorina ilay tariby.
Haingana, ireo mpanaraka ny bilaogy hafainganam-pandeha dia namaly haingana tamin'ny fanehoan-kevitra fa ny tadin'ny herin'ny HomePod dia tsy afaka esorin'ny mpampiasa farany. Ny zava-misy dia noho ny tabataba sy ny tsy fahalalana na fampahalalana ratsy ataon'ny olona maro dia tsy maintsy manoratra ity lahatsoratra ity aho. Lahatsoratra iray ao no hametrahako mazava ny antony mahatonga ny tariby HomePod lazaina fa tsy azo esorina.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny HomePod eny an-tsena, mpampiasa maro no manolo-tena hanao zavatra adala miaraka aminy. Atsipazo avy any amin'ny havoana izy, manapaka azy amin'ny tsofa, mandrovitra ny tapany mandra-pahatonga azy ho tsy misy ilana azy. Raha fintinina, ny olona, ​​raha ny fahitako azy, izy ireo dia tsy manome lanja ny angovo sy ny akora efa niasa hanamboarana izany vokatra izany ary tsy omeny akory ny fiainany mahasoa dia tapahin'izy ireo izany hahazoana mpanjifa vitsivitsy. Eny, ny iray tamin'ireny olona ireny dia nanala haingana ny tadin'ny herinaratra tao amin'ny HomePod.
Noho io antony io dia tsy maintsy nisintona hery matanjaka be izy, izay manondro fa ny Apple mihitsy dia tsy mamela izany hatao. Taorian'izay dia manamafy ny tranokala iFixit fa, raha ny marina, Ny fanesorana ny tariby dia tsy mora velively ary ny fanaovana izany dia mety hanimba ilay mpampifandray ary hahatonga ny mpandahateny ho tsy ilaina. Ka raha hividy HomePod ianao, aza variana amin'ny zavatra ataon'ny sasany ary na dia milaza kely aza amintsika izay mampahafantatra fa tsy maintsy mampifanohitra ny loharanom-pahalalantsika satria izany indrindra no antony anaovantsika tatitra, mba tsy hanao fahadisoana amin'ity fomba ity ny mpamaky antsika.
Raha izany, raha efa namaky ity lahatsoratra ity ianao ary ho lasa tompona HomePod ho avy, antenaina fa tsy hanao fahadisoana ianao amin'ny famongorana ny tariby satria tsy mieritreritra izahay fa handoa 400 euro izany. hisintona ny tariby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Ny tadin'ny herin'ny HomePod dia tsy natao esorina.
Mety efa nalamin'i Apple ny olan'ny vibration an'ny HomePod